बाल संसार Archives - Page2of2- NepalDut NepalDut
बालकथा : निरुपा र प्रसून
निरुपा र प्रसुन घरमै बसेको पनि दुई महिना पुग्नै आँट्यो । यस बीचमा न मामाघर जान पाए, न बजार जान पाए न घुम्न कतै जान पाए । न त परीक्षाको नतिजा नै जान्न पाए । निरुपा र प्रसुन घर बसेर दिक्क भइ सकेका छन् । प्रसुन भन्छ, "दिदी ! कति हेर्नू के टि भि ? कति खेल्नु मोबाइलमा गेम ? मलाई त दिक्क लागिसक्यो भन्या । आमालाई भनेर बाहिर जाऊँ… पुरा पढौ